Raw Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Vaiti - Phcoker
Kemikari Name Raw Palmitoylethanolamide powder;
Kirasi yeMishonga Amines, Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals
Molecular Wsere 299.499 g / mol
Kunyorera Point 93 kusvika 98 ° C (199 kusvika 208 ° F; 366 ku371 K)
Kubikira pfungwa 461.5 ° C pa 760 mmHg
Raw Palmitoylethanolamide powder APane Raw Palmitoylethanolamide powder inogumira CB2 cannabinoid receptor agonist uye kusarudza GPR55 agonist.
Raw Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Tsanangudzo
Raw Palmitoylethanolamide powder (PEA) inogumira mafuta acid amide, inowanikwa mukirasi ye nyukireya chinonzi agonists. Palmitoylethanolamide (PEA) inobudiswa mumuviri kurwisa kurwadziwa nekuputika. Mhuka dzakawanda nemiti zvinowedzerawo pea. Iko yakanyanya kudhura inogona kuwanika mu lecithin soy, soybee, mazai yolk, maranho, uye alfafa. Iyi mafuta yakawanda inogona kukudzivirira nekuchengetedza zviratidzo zvako zvepanyama uye kuchengetedza mitsipa mumuviri wako wose. Makomborero ayo anokurudzira kune zvakasiyana-siyana zvakaoma-kubata-kubata zvinetso.
Palmitoylethanolamide yakaratidzwa kuti inosungirirwa kune inotora mu-cell-nucleus (nuclear nuclear) uye inobata zvinhu zvakasiyana-siyana zvehupenyu zvine chokuita nekurwadziwa kusingaperi nekuputika. Icho chinangwa chikuru chinofungidzirwa kuva peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR-α). Zvisinei, kuvapo kwePalitoylethanolamide (uye dzimwe nhengo dzakagadzikana N-acylethanolamines) zvave zvichizivikanwa kuburikidza nekuita basa reAnandamide neinoti "inhurage effect". Raw Palmitoylethanolamide powder / PEA yakaratidzwa kuva ne-anti-inflammatory, anti-nociceptive, neuroprotective, uye anticonvulsant.
Sekuwedzera, PEA inowanikwa muhwendefa, capsule, uye fomu yeupfu. MuItaly neSpain, PEA inotengeswa sezvokudya zvezvinoda kurapa.
Palmitoylethanolamide inobatsira PPAR alpha inowedzera simba, inopisa, uye inopesana. Nokugadzira iyi proteine ​​inokosha, PEA inomisa basa repro-inflammatory genes uye kugadzirwa kwezvinhu zvakawanda zvinopisa simba.
Palmitoylethanolamide inoderedza basa rezvinofadza gene FAAH iyo inoparadza zvisikwa zvekudya zvinokonzerwa neannabinoid anandamide. Izvi zvinowedzera maitiro ekugadzirisa anandamide mumuviri wako, achibatsira kurwisa kurwadziwa uye kuwedzerwa kunonoka. Icho chinogonawo kushandisa cannabinoid receptors (CB2 uye CB1).
Palmitoylethanolamide ine the palmitic acid muchimiro chayo. Kutanga kwekuita peA mumuviri ndizvo chaizvo izvi zvakasikwa mafuta asidi.
Zvisinei, kungowedzera kuwedzerwa kwemuti weti palmitic kana mamwe mafuta ezvokudya hazvigoni kuchinja Palmitoylethanolamide mumutumbi. Izvi ndezvokuti muviri wako uchishandisa PEA chete apo inoda kubhadharisa kuvhiringidza kana kurwadziwa, uye mazinga ayo achawanzosiyana-siyana zuva rose. Nzira yakanakisisa yekuwana zvikomborero zvePA ndeyezvidimbu zvinowedzera, kana zvimwe zvePA-rich rich foods.
shandisa yePalititoylethanolamide powder (544-31-0)
▪ Urombo hwekutonga
Yakakurudzirwa Palmitoylethanolamide powder (544-31-0) Dosage
Zvimwe zvidzidzo zvekuchipatara zvingabatsirika asi pane zvimwe zvakakwana zvekureva kuti Palmitoylethanolamide inowedzera yakachengeteka. Kunyangwe kwenguva refu PEA supplementation haina kubatana nemigumisiro ipi zvayo yakaipa. Palmitoylethanolamide yakashandiswa mumatare e300 mg kusvika 1.8 g / zuva mune zvidzidzo zvechipatara.
▪ Zvichida 600 mg / zuva inogona kudiwa kuti isunungure kurwadziwa kweperesi, asi maitiro e1.2 g / zuva akashandiswa mukurwadziwa kweshuga yehutachiona.
▪ ECHA kusvika ku1.8 g / zuva yakashandiswa pakuderedza kukanganisa kwemaziso emeso kune vanhu vane glaucoma kana chirwere cheshuga.
▪ Kurwisana nehuwandu hwehutano, 1.2 g / zuva yaiva yepamusoro.
▪ Nhamba yose inogona kuparadzaniswa kuva maviri panguva yemasikati. Tinokurudzira kutanga nemutengo wakaenzana we1.2 g / zuva wakapatsanurwa kuva 600 mg mangwanani uye 600 mg masikati. Tevedzera mhinduro yako uye zvishoma nezvishoma kuwedzera muyero mushure memwedzi we1 kana zvichidikanwa.
Micronized Palmitoylethanolamide zvakashandiswa zvakashandiswa mune zvidzidzo zvakawanda zvakakwirira pane mamwe maitiro. Micronized Palmitoylethanolamide ipfundo rakanaka kwazvo rinonyanya kukoshesa uye rinoshanda. Palmitoylethanolamide yakabatana neLuteolin yaishandiswawo mumakiriniki emakiriniki uye ichave yakakosha zvikuru yehutano hwehuropi.
kubatsira Palmitoylethanolamide powder (544-31-0)
Kubva pakuwanikwa kwayo mu1950s, vatsvakurudzi vave vachifarira Palmitoylethanolamide. Simba rakasimba uye rakachengeteka painkiller uye rinopesana nekuputika, Palmitoylethanolamide inopa tariro yevanhu vakawanda vanotambura nekurwadziwa kwenguva refu uye neuropathic. Kunze kwekubatsira uku, Palmitoylethanolamide powder inogona kupa zvigaro zvehutano hwako. Kune zvimwe zvikwereti zvekutarisa:
♦ Pea inoderedza marwadzo nekuputika
• Kuvandudza Bhutano Health uye Kuberekwazve
♦ Zvakanaka Maziso Ako
♦ Zvidzivirire Mwoyo Wako
♦ Kuderedza Gutuka Kwemvura
♦ Zvingaita Kuderedza Dhiyabhorosi Zviratidzo.
• Inoderedza Zviratidzo zve Multiple Sclerosis
♦ Zvingaita Kurwisana neCold Common
• Inoderedza Histamine Release
Zvitsva zvinobatsira zvePalitoylethanolamide zvinoramba zvichiwanikwa, zvichisiya vamwe masayendisiti vakavhunduka. Icho chinotarisa kuti Palmitoylethanolamide inogonawo kushandura zvinokonzerwa ne-cannabinoid, kugadzirisa mafungiro, kuderedza kuora kwemhepo.
Ndedzipi chokwadi paPalmitoylethanolamide (PEA) ine zvakanaka pakuderedza uremu?